Ama-Meatballs ku-carrot ne-tomato sauce | Ukupheka Kwekhishi
Ama-Meatballs ku-isanqante ne-tomato sauce
Ekhaya siyathanda ukulungisa ama-meatballs futhi siwakhonze ngososo abahlukahlukene. Lezi ama-meatballs ku-carrot ne-tomato sauce engikuphakamisayo namhlanje ngezinye zezinto esizithanda kakhulu. Isoso layo liphinde lihle ukuhambisana nezitsha ze-pasta nelayisi noma kungani kungenjalo, iqanda elithosiwe.
Ungagcina lawa ma-meatballs ku- isiqukathi esingangeni moya esiqandisini kufika ezinsukwini ezine noma efrijini ukuze zisuswe kamuva. Ngenxa yalesi sizathu, sikukhuthaza ukuba uphane ezingxenyeni lapho uzenza futhi ulungiselele ezinye ukuthi zibe yiqhwa. Zizongena zilusizo uma ufushane ngesikhathi noma nje ungazizwa uthanda ukupheka.
Kusoso, ngaphezu kwezithako engizisebenzisile, ungafaka nabanye. Umqondo ukwazi ukusebenzisa lokho onakho ekhaya futhi usuzokonakala. Ucezu lwethanga luzothambisa isoso, kuthi ucezu lukakholifulawa luzothambisa ukunambitheka kwalo. Kuyindaba yokuhlola!
Lawa ma-meatballs ku-carrot ne-tomato sauce ayindlela enhle yokuqedela imenyu yakho. Zigcina kahle kakhulu esiqandisini futhi zingamiswa yiqhwa!
650 g. inyama egayiwe (ingxube yenkomo nengulube)
1 ithisipuni iparsley
Izingcezu ezi-3 zesinkwa esisikiwe
Amafutha omnqumo e-virgin angeziwe (okuthosa)
2 upelepele oluhlaza wase-Italy
1 upelepele obomvu wase-Italy
3 izaqathe, oqoshiwe
1 ingilazi yetamatisi othosiwe.
1 ithisipuni ye-cornstarch
Sithela ubisi epuletini bese sivumela izingcezu zesinkwa cwilisa kahle.
Ngenkathi, sifaka endishini ezinye izithako ezidingekayo zokwenza ama-meatballs nokuxuba.
Ngemuva sikhama isinkwa ukuyifaka ekuxubeni uphinde uyihlanganise yonke futhi.
Sithatha izingxenye ezincane zenhlama futhi sibumba ama-meatballs ngezandla.
Uma sesenziwe, siyabadlulisa ngofulawa futhi siwathosa emafutheni kushisa kakhulu ngamaqoqo. Njengoba zinsundu, sizikhiphela ku-a ugqoko onephepha lokumunca ukususa amafutha amaningi nokugcina.
Ngemuva kwalokho silungisa usoso. Ukwenza lokhu, thosa u-anyanisi, upelepele nogalikhi epanini ngezipuni ezintathu zamafutha imizuzu emihlanu.
Ngemuva sifaka isanqante, isizini bese ususa eminye imizuzu engama-4 ngaphambi kokufaka iwayini elimhlophe. Uma usufakiwe, pheka imizuzu embalwa uze wehliswe.
Sifaka utamatisi othosiwe, i-paprika kanye ne-cornstarch bancibilika emanzini. Hlanganisa bese upheka yonke imizuzu eyi-15 noma kuze kube yilapho isanqante ithambile.
Kanye ithenda, sichoboza isoso bese ulungisa iphoyinti likasawoti uma kudingeka.
Letha usoso emathunjini, engeza ama-meatballs bese uwavumela ukuba apheke emlilweni omncane imizuzu engu-5.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Inyama Ungadliwa » Ama-Meatballs ku-isanqante ne-tomato sauce
Irayisi elinsundu elinokholifulawa kanye ne-broccoli eshubile